Vashandi veCSU Vanorara Zvakare Muchitokisi
Mapurisa anonzi apfikira zvakare vashandi veCSU achiti haasati apedza kugadzrisa magwaro ekuvapomera mhosva
WASHINGTON — Vashandi vesangano rinobatsira vanenge vashungurudzwa, reCounselling Services Unit, CSU, avo vakasungwa neMuvhuro vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora zvidziro zvechimwe chivakwa muBulawayo, vachiri mumaoko emapurisa pakamba yeHarare Central apo vari kutarisirwa kurara zvakare usiku hweChipiri.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ayo ari kumirira mukuru wesangano iri, VaFidelis Mudimu, VaZachariah Godi pamwe naVaTaFadzwa Gesa, anoti mapurisa ari kuti achiri kugadzira magwaro emhosva yavari kupomerwa.
Mapurisa anzi ari kuti vasungwa ava vangangoendeswa kuBulawayo, kunonzi ndiko kwakaparirwa mhosva iyi.
Asi mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaKumbirai Mafunda, vanoti havaoni mapurisa achiendesa vasungwa ava kumatare neChitatu sezvo ari kuratidza kunge ari kuda kuti vagare muhusungwa kwenguva yakareba.
Matikitivha anodarika gumi akanga aine magwaro ekuvabvumidza kusecha anonzi neMuvhuro masikati akapinda mumahofisi esangano reCSU muHarare achiti aitsvaga zvinhu zvaanoti zvakashandiswa mukupenda mudhuri wechimwe chivakwa chekuBulawayo chakapiwa kuguta iri nenhengo yeZanu PF, VaSikhanyiso Ndlovu.
Mapurisa aya, ayo aitungamirwa naDetective Assistant Inspector Henry Dowa, anonzi akazotorawo midziyo yesangano iri inosanganisira makombiyuta nezvimwe.